Lahatsary mampiseho ny heverina ho Xiaomi mivalona finday | Androidsis
Horonan-tsary mampiseho ilay finday heverina ho Xiaomi mivalona
Ny ady hahitana hoe iza no mpanamboatra mandefa smartphone amin'ny haben'ny efijery lehibe kokoa toa nifarana, na dia mbola mahita rambony eo aminy aza isika. Ny hoavin'ny tontolon'ny telefaona dia hita ao amin'ny efijery aforitra. Efa ho roa volana lasa izay, namoaka izay ho finday finday avo lenta i Samsung, manafina ny ankamaroan'ny endriny noho ny antony mazava.
Evan Blass, mpamaky trano fanta-daza, azonay antsoina hoe tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny mpanamboatra finday avo lenta, dia namoaka horonantsary tao amin'ny kaonty Twitter-ny, izay nilazany fa tsy afaka manaporofo fa tena izy io, fa izy dia terminal novokarin'i Xiaomi. Ao amin'ny horonantsary no ahitantsika takelaka iray mivalona ho lasa smartphone.
Tsy afaka miresaka amin'ny maha-azo itokiana an'ity horonantsary na fitaovana ity, fa Xiaomi no nanao azy, hoy aho. Finday vaovao mafana, na deepfake sary vetaveta? pic.twitter.com/qwFogWiE2F
- Evan Blass (@evleaks) Janoary 3, 2019
Tsy vao sambany io ary tsy ho ity koa no farany namoahana horonan-tsary toy izany farany tsy marina tanteraka. Ny fikasan'ny Samsung sy i Huawei hanangana finday avo lenta dia efa fantatra hatry ny ela, ka ny orinasa Koreana no voalohany nanatrika zavatra araka ny nolazaiko etsy ambony.
Mety efa elaela ihany koa i Xiaomi no niasa tamin'ity sehatra ity, fa farafaharatsiny tsy naheno momba an'io izahay. Araka izay azontsika atao amin'ny horonantsary, rehefa misokatra tanteraka ilay fitaovana dia asehony antsika ny fifandraisan'ny takelaka. Fa rehefa aforitra dia tsy mampiseho ny fampiasa finday smartphone.
Ny hevitra dia tsy ratsy, fa raha raisintsika an-tsaina izany rehefa mivalona ny terminal, ny sisin'ny efijery mijanona eo ivelany, ny latsaka kely ao aminy dia mety hanimba ny fampiasam-bola nataontsika tao amin'ny terminal. ny modely samsung, mampiseho amintsika ny efijery iray izay aforitra ao anatiny ary misy efijery ivelany, izay ahafahantsika mifandray amin'ny fitaovana toy ny hoe smartphone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Horonan-tsary mampiseho ilay finday heverina ho Xiaomi mivalona
Ker dia hoy izy:
Ny efijery malefaka dia mahatohitra kokoa ny fiantraikany.
Mamaly an'i ker
Ho tonga ny Huawei Mate 30 Pro miaraka amin'ny fakantsary miverina dimy, araka ny fangatahana patanty efa navoaka